Raadinta deegaanka, ogow saameyntaada iyo sida loo xisaabiyo | Cusbooneysiinta Cagaaran
Raadinta deegaanka, ogow saameyntaada iyo sida loo xisaabiyo
Daniel Palomino | | Ecology, Deegaanka
Waxaa jiray a tilmaame caalami ah waana hubaal inaad maqashay. Tilmaamahan waa raadadka deegaanka.
Caqabadaha cusub ee soo kordhay, waxaan u baahannahay inaan kordhinno oo aan dhammaystirno dhammaan macluumaadka suurtagalka ah ee GDP (Waxsoosaarka Guud ee Gudaha) uu na siin karo, iTilmaame ayaa loo isticmaalay adduunka oo dhan marka loo eego xaaladda dhaqaale.Tani waxay lagama maarmaan u tahay awood u yeelashada qaabeynta siyaasado isku dheelitiran oo ka tarjumikara dadaalka loogu jiro Deegaanka iyo ladnaanta bulshada
Tilmaamahan noolaha ee joogtaynta, oo waxaan haddaba ka hadlayaa oo keliya raadadka deegaanka, wuxuu awood u leeyahay inuu dhexgalo saamaynta ay bulshada aadamuhu ku leedahay deegaankeeda. Iyadoo loo tixgelinayo sida macquul tahay, dhammaan ilaha lagama maarmaanka ah iyo sidoo kale qashinka ka dhasha bulshada la sheegay.
1 Waa maxay raadadka deegaanka?
2 Daraasadda raadadka deegaanka
2.1 Saamaynta dhabta ah ee deegaanka
4 Xisaabi raad raaca deegaanka
4.1 Tiri isticmaalka qaybaha kala duwan ee unugyada jirka
4.2 U beddel isticmaalkan dusha sare ee bayoolojiga wax soo saar leh iyada oo loo marayo tilmaamaha wax soo saarka
4.3 Isticmaalka tamarta
4.4 Xisaabinta harsan
5 Xisaabi raad raaca deegaankaaga
6 Dhex dhexaad raadkeena deegaan
Waa maxay raadadka deegaanka?
Raadka bey'adda ayaa sidaas darteed loo qeexay inuu yahay
Wadarta guud ahaan deegaanka wax soo saarka deegaanka ee lagama maarmaanka u ah soo saarista ilaha uu cuno celcelis ahaan muwaadin ka tirsan bulshada aadanaha, iyo sidoo kale kuwa lagama maarmaanka u ah in la dhuuqo qashinka ay soo saaraan, iyadoo aan loo eegin meesha ay ku yaalliin aagagani.
Daraasadda raadadka deegaanka
Si loo dejiyo inay tahay tilmaame, waa inaan marka hore ogaanno sida loo xisaabiyo raadadka la yiri, tan, dhinacyada sida:
Qulqulka qalabka iyo tamarta ayaa had iyo jeer loo baahan yahay si loo soo saaro wax kasta oo wanaagsan ama adeeg ah (iyadoon loo eegin tiknoolajiyada la isticmaalay). Qalabyadan iyo tamarta ka timaadda nidaamyada bey'ada ama tamarta tooska ah ee uga timaadda Qorraxda muuqaalkeeda kala duwan.
Iyagana waa loo baahan yahay, nidaamyada deegaanka si loo nuugo qashinka la soo saaray inta lagu jiro howlaha wax soo saarka iyo isticmaalka alaabada ugu dambeysa.
Meelaha ay nidaamyada deegaanka wax soo saar leh ayaa yaraaday tan iyo markii boosku degan yahay oo leh guryo, qalab, kaabayaal dhaqaale ...
Sidan ayaan ku arki karnaa sida tilmaamahan isku dhafan saameyn badan, in kasta oo kuwa kalena ay tahay in sidoo kale la tixgeliyo, sida kuwa dhayalsada saamaynta dhabta ah ee deegaanka.
Saamaynta dhabta ah ee deegaanka
Saamaynta qaar lama xisaabtamo, gaar ahaan dabeecad tayo leh, sida wasakhda carrada, biyaha, iyo jawiga (marka laga reebo CO2), nabaad guur, luminta kala duwanaanshaha noolaha ama nabaad guurka ka soo jeeda dhulka.
Hawlaha beeraha, xoolaha iyo kaymaha ayaa loo maleynayaa inay waarayaan, taas oo ah, wax soo saarka carrada oo aan hoos u dhicin waqtiga.
Saameynta la xiriirta isticmaalka biyaha xisaabta laguma darsan karo, marka laga reebo qabsashada tooska ah ee dhulka ee kaydad biyoodka iyo kaabayaasha korantada iyo tamarta laxiriirta maaraynta wareegga biyaha.
Qeexitaan guud ahaan, waxaa la isku dayay in aan la tirin dhinacyadaas ay shakiga ka qabaan tayada xisaabinta.
Marka la eego, sidoo kale waxaa jira had iyo jeer u janjeera in la doorto ikhtiyaarka ugu caqliga badan markay tahay helitaanka natiijooyinka.
Qeyb kaabis ku ah raadka bey'ada waa bayoolajiyadda dhul. Kaliya waa bayoloji ahaan wax soo saar leh taas oo la heli karo sida dalagyada, keymaha, daaqa, badda wax soo saarka leh ...
Waxaan tixraacayaa awood-siinta (biocapacity) sida cunsur dhammaystiran maxaa yeelay farqiga tilmaamayaashaas natiijo ahaan na siinaysaa cillad xagga deegaanka ah. Taasi waa, cillad bey'adeedku waxay u dhigantaa tan dalab kheyraad (raadka deegaanka) ka yar ilaha la heli karo (biocapacity).
Marka laga eego dhinaca caalamka, waxaa lagu qiyaasay 1,8 ha biocapacity-ka meeraha deggane kasta, ama maxaa la mid ah, haddii aan ku qasbanaan lahayn inaan u qaybinno dhulka wax soo saarka leh ee dhulka qaybo isku mid ah, mid kasta oo ka badan lix bilyan oo ku nool meeraha, 1,8 hektar waxay u dhigmi doontaa inay qanciso dhammaan baahidooda hal sano gudahood.
Tani waxay na siineysaa fikrad ku saabsan isticmaalka iyo kharashka badan ee aan sameyno, taasna waa, haddii aan sidan ku sii socono, Dhulku ma awoodi doono inuu qof walba siiyo.
Xog ahaan xiisaha leh, ka faallo intaas USA waxay leedahay raad ah 9.6Tani waxay ka dhigan tahay in haddii dunida oo dhami ay u noolaato sida Maraykanka ay qaadan lahayd in ka badan 9 meerayaasha iyo badh Dunida.
Raadinta deegaanka ee Spain waa 5.4
Xisaabi raad raaca deegaanka
Xisaabinta tilmaamahan wuxuu ku saleysan yahay qiyaasta aagga wax soo saar ee lagama maarmaanka u ah qancinta cunnada la xiriirta, wax soo saarka kaynta, isticmaalka tamarta iyo qabsashada dhulka tooska ah.
Si loo ogaado dusha sare, laba tallaabo ayaa la fuliyaa:
Tiri isticmaalka qaybaha kala duwan ee unugyada jirka
Haddii ay dhacdo in aysan jirin macluumaadka isticmaalka tooska ah, isticmaalka muuqda ee shey kasta waxaa lagu qiyaasaa muujinta soo socota:
Isticmaal muuqda = Soosaarid - Dhoofin + Soo Dejin
U beddel isticmaalkan dusha sare ee bayoolojiga wax soo saar leh iyada oo loo marayo tilmaamaha wax soo saarka
Tani waxay u dhigantaa xisaabinta aagga lagama maarmaanka u ah qancinta celceliska isticmaalka qofkiiba ee alaab la siiyay. Qiimaha wax soo saar ayaa loo isticmaalaa.
Raadinta bey'ada = Isticmaalka / Waxsoosaarka
Qiyamka wax soo saar ee aan adeegsan doono waxaa loo gudbin karaa heer caalami, ama waxaa loo xisaabin karaa si gaar ah dhul cayiman, sidaas awgeed iyada oo la tixgelinayo farsamada la adeegsaday iyo waxqabadka dhulka.
Xisaabinta caadiga ah, ka adeegsiga isirrada waxsoosaarka adduunka (sida ay tahay kiiska aad kor ku aragtay) maxaa yeelay waxaa suuragal ah in sidan lagu sameeyo isbarbardhigga qiyamka laga helay raadadka bey'eed ee miisaanka maxalliga ah waxayna ku biirinaysaa wadarta guud ee tilmaame.
Si loo helo raadka bey'ada ee la xiriira isticmaalka tamarta, waxaa loo sameeyaa si ka duwan iyadoo ku xiran isha tamarta in la tixgeliyo.
Shidaalka shidaalka. Ilaha ugu muhiimsan ee tamarta la cuno, in kasta oo ay sii yaraanayaan mahadnaqidda tamarta la cusboonaysiin karo, raadadka bey'ada cabbiraa aagga nuugista CO2.
Tan waxaa laga helaa wadarta isticmaalka tamarta, labadaba mid toos ah oo la xiriira soo saarista iyo qaybinta alaabada iyo adeegyada la cuno, oo loo qaybiyay awoodda hagaajinta CO2 ee aagga keynta.
Marka la tirtiro waxyaalaha la isticmaalay oo la adeegsado tusmooyinka wax soosaarka, waan heli karnaa meelaha wax soo saarka kala duwan tixgeliyey (dalagyada, daaqa, kaymaha, badda ama sagxadaha macmalka ah).
Qayb kasta waxay leedahay wax soo saar bayoolojiyeed oo kala duwan (tusaale ahaan: hektar dalag ah ayaa ka wax soo saar badan kan badda), ka hor inta aan lagu darinna waxaa lagama maarmaan ah in loo sii gudbo waxa lagu qeexay caadi ahaanshaha.
Si tan loo sameeyo, dusha kasta waxaa lagu cabiray iyada oo loo adeegsanayo isirro u dhigma oo muujinaya xiriirka ka dhexeeya wax soo saarka bayoolojiga ee qayb kasta oo ka mid ah dusha sare marka loo eego celceliska wax soo saarka dusha meeraha.
Dareenkan, xaqiiqda ah in isbarbar dhigga kayntu tahay 1,37 waxay ka dhigan tahay in wax soo saarka hal hektar oo kayn ah uu leeyahay, celcelis ahaan, 37% wax soo saar ka badan celceliska waxsoosaarka aagga oo dhan.
Marka qodobbada u dhigma lagu dabaqo qayb kasta oo ka mid ah dusha xisaabinta, hadda waxaan haysannaa raadadka deegaanka oo lagu muujiyey waxa loo yaqaan hektar caalami ah (gha).
Iyo intaas oo dhan haddii aan sii wadi karno inaan ku darno dhammaantood oo markaa helno wadarta raadadka deegaanka.
Xisaabi raad raaca deegaankaaga
Weligaa ma isweydiisay intee in le'eg "dabeecadda" qaab nololeedkaagu u baahan yahay? Su'aalo-weydiinta "Raadinta deegaanka" waxay xisaabineysaa xaddiga dhulka iyo bedka ay lagama maarmaanka u tahay dayactir qaababkaaga isticmaalka oo u nuugo qashinkaaga sanad walba.
Sida qaab caadi ah, qalabkani wuxuu badanaa wax ka qabtaa meelaha soo socda:
Energia: Ku isticmaalka tamarta guriga. Xisaabinta caalamiga ah ee nooca tamarta sanadkiiba, iyo waliba kharashka ku baxa.
Biyaha: Qiyaasta boqolleyda isticmaalka celcelis ahaan iyo cawaaqibka ka dhalan kara guud ahaan qaabka aad biyaha u isticmaaleyso.
Gaadiidka: Immisa leexleexis ah oo dhammaystiran ayaad samayn kartaa meeraha adigoo ku daraya dhammaan barakaca sanad gudihiis.
Qashinka iyo qalabka: Tirada qashinka ka soo baxa guriga qofkiiba iyo boqolleyda qalabka dib loo cusboneysiin karo.
Ka dib markaad u jawaabto 27 su'aalood oo fudud MyFootPrint, waxaad awoodi doontaa inaad isbarbar dhigto raadkaaga deegaanka iyo kan dadka kale waxaadna ogaan doontaa sida aan u yareyn karno saameynta aan ku leenahay Dhulka.
Booqo bogga footprint kana jawaab su'aalaha.
Haddii qof kastaa noolaan lahaa oo uu qaab nololeedkiisa oo kale heli lahaa waan u baahan lahayn 1,18 Dunida, Wax yar ayaan dhaafaa in kastoo sanadihii la soo dhaafay ay hoos u dhacday tan iyo markii aan markii ugu horeysay wax ka bartay fikradda raad raaca bey'ada waan sameeyay waana xasuustaa inaan ahaa 1,40, marka waxaan ku soconaa wadada saxda ah.
Dhex dhexaad raadkeena deegaan
Raadinta deegaanka deegaanka
para halabuurka raadadka bey'ada ee Isbaanishka qodobka ugu muhiimsan waa raad tamarta, oo leh saamiga 68%, oo ka sarreeya 50% ee laga aasaasay adduunka.
Sababtaas awgeed, waxaa muhiim ah in la ogaado in qaybta ugu weyn ee raadkani (raadka tamarta) uu yahay wax soo saarka badeecadaha macaamiisha oo leh 47,5%, tan Waxaa lagu xisaabiyaa isticmaalka tamarta tooska ah iyo tamarta ku jirta alaabada dibadda laga keeno.
Ka dib markii aan ku jirnay kaalinta labaad waxaan haynaa qaybta gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqa oo leh 23,4% iyo guryaha kaalinta saddexaad oo leh 11,2%.
Iyada oo ku saleysan xogtan, waxaa lagu qiyaasay in Isbaanishku wuxuu leeyahay cillad bey'adeed oo ah 4 ha qofkiiba, taas oo ah, 175 milyan oo hektar dalka oo dhan.
Marka la soo koobo, sanadkiiba dadka reer Isbaanishka ayaa u baahan in ka badan 2,5 jeer dhulkeeda si ay u awoodaan inay joogteeyaan heerka nolosha iyo dadka. Sidaa darteed, waxaan leenahay cillad bey'eed oo ka sarreysa celceliska EU-da taasna waxay muujineysaa in Spain ay leedahay meel bannaan oo keliya si ay u siiso cunnada iyo wax soo saarka keymaha dadka hadda jira
Laakiin waxa muhiimka ah halkan waa taas mar haddii aan helno natiijada raadadka deegaanka waa inaan yareynnaa.
Yaraynta raadadka caalamiga ah ama heer shaqsiyeed waa wax aan ka badneyn adeegsiga caadooyinka wanaagsan ee waara sida adeegsiga caqliga leh ee biyaha, isticmaalka gaadiidka dadweynaha ama qaab kale oo aan wasakheyn, dib u warshadeyn, isticmaalka nalalka nalalka isticmaalkiisu hooseeyo, dahaarka daaqadaha iyo albaabada, isticmaalka qalabka wax ku oolka ah iyo dheer iwm.
Caadooyinkan fudud (oo wax yar ku kaca marka hore laakiin aakhirka qayb ka noqda nolosheena) waxay saameyn ku yeelan kartaa keydinta tamarta gudaha qiyaastii 9% qoyskiiba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Ecology » Raadinta deegaanka, ogow saameyntaada iyo sida loo xisaabiyo
Jasiiradaha Balearic waxay ku kordhin doonaan awooddooda dib-u-cusboonaysiinta 25% iyadoo leh 7 jardiinooyin cusub oo qorraxda ah
Wasakhda hawadu waxay sababtaa 16.000 oo dhimasho dhicis ah sanadkiiba